मनोरञ्जन | Sagarmatha TV
‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ आजबाट
काठमाडौं । हास्यकलाकार जितु नेपाललले सञ्चालन गर्ने ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ सोमबारबाट नेपाल टेलिभिजनमा प्रशारण हुनेछ । कार्यक्रमबारे जानकारी दिन हालै आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कार्यक्रमकी निर्देशक तथा अध्यक्ष दिपाश्री निरौलाले बताएकी ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ भारतीय कमेडी शो ‘कपिल शर्माको शो’बाट प्रभावित भएको बताएकी छिन् । कार्यक्रमको औपचारिक घोषणामा पत्रकारहरु माझ उनले कपिल शर्मा शोको कपि नभई […]
पीपीएल क्रिकेटः उपाधिका लागि पोखरा र चितवन भिड्ने
काठमाडौं । पोखरामा जारी पोखरा प्रिमियर लिग अन्तर्गत पारसको कप्तानीमा रहेको चितवन राइनोज फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । काठमाडौंलाई ६ विकेटले हराउँदै चितवनले पोखरा पल्टनसँगको भेट पक्का गरेको हो । पोखरा शुक्रबार नै समुहको शीर्षमा रहँदै फाइनल प्रवेश गरिसकेको थियो । फाइनल खेल मंगलबार हुनेछ । पोखरा रंगशालास्थित क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको इलिमिनेटरमा खेलमा काठमाडौंले […]
नेपाली फिल्ममा सन्नी लियोनी
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी नेपाली चलचित्रमा देखिने भएकी छिन् । उनी ‘पासवर्ड’ नामक नेपाली चलचित्र अभिनय गर्न लागेकी हुन् । एबी इन्टरनेशनलले पहिलो पटक निर्माण गर्न लागेको ‘पासवर्ड’मा सन्नीको आइटम डान्ससमेत रहने बताइएको छ । चलचित्रबाटर सन्नीले ट्वीट गर्दै खुशी व्यक्त गरेकी छिन् । उनले ट्वीटमा लेखेकी छिन्–‘बहुप्रतिक्षित नेपाली चलिचित्र ‘पासवर्ड’ को डान्स […]
‘चंगा चेट’को ओपनिङ सुखद्, मालिकालाई मिलेनन् दर्शक
काठमाडौं । गएको शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आएको दीपेन्द्र के. खनाल निर्देशित कमेडी फिल्म ‘चंगा चेट’ले बक्सअफिसमा सुखद ओपनिङ गरेको छ । प्रदर्शनको पहिलो दिन ६० प्रतिशत अकुपेन्सी कायम गरेको फिल्मको शनिबार बिहानदेखि साँझसम्म ८०–८५ प्रतिशतको आसपास अकुपेन्सी रहेको वितरकको दाबी छ । ‘फिल्मको ‘वर्ड अफ माउथ’ एकदमै राम्रो छ’, उत्साहित हुँदै निर्देशक खनालले भने, ‘शुक्रबारभन्दा शनिबार […]
कस्तो चल्छ ? रेखाको रहर र परिमिता प्रतिक्षा
काठमाडौं– फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत यो शुक्रबारबाट दुई चलचित्र मालिका र चंगा चेट दर्शकमाझ आएका छन् । रेखा थापको निर्माण र अभिनय रहेको चलचित्र मालिका र माधव वाग्लेको निर्माणमा बनेको चलचित्र चंगा चेटको शुक्रबारबाट व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरु भएको हो । यी दुई चलचित्रको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा निकै नै संघर्षपूर्ण देखिन्छ । दुवै चलचित्रका सामु धेरै चुनौती खडा […]
शुक्रबार, कार्तिक १६, २०७५
‘चौका दाउ’मा सोनीकाले दिइन् वर्षालाई चुनौती
काठमाडौं । चलचित्र ‘चौका दाउ’को दोस्रो गीत ‘मेरो माया कतारमा…’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकार सन्तोष पन्त, विल्सन विक्रम राई, तैयव शाह, रविन्द्र झा, निर्मल शर्मा, वर्षा रावत, अजस्र ढुंगाना, सोनिका केसी लगायतका कलाकारलाई समेटिएको छ । ‘मेरो माया कतारमा’ बोलको गीतमा सोनिकालाई बोल्ड अबतारमा देखाइएको छ । साथमा अभिनेत्री बर्षा राउतले […]
जब दीपिका र दिवाकर यस्तो अवस्थामा भेटिए
काठमाडौं । एक वर्ष अगाडि कोर्ट म्यारिज गरेको भनिएका प्रेमजोडी नायिका दीपिका प्रसाईं र निर्देशक दिवाकर भट्टराई अहिले थाइल्याण्डमा रमाइरहेका छन् । उनीहरुले सामुद्रिक किनारमा मस्ती गरेका तस्विरहरु सार्वजनिक गरेका छन् । दशैँलगत्तै औँठी साटिएको भनिएको यो जोडी यतिबेला हनिमुन टुरका लागि थाइल्याण्ड पुगेका छन् । लामो समय ‘लिभ इन रिलेसनसिप’मा रहेको जोडीले केही दिन […]
किन यस्ती बनिन् साम्राज्ञी
काठमाडौं । नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले हेलोविन रुप सार्वजनिक गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा फोटो शेयर गर्दै उनले हेलोविन पर्व मनाएको जानकारी दिएकी हुन् । इसाइ धर्मावलम्बीहरुको एक प्रमुख चाडका रुपमा परिचित यो चाड पछिल्लो समय नेपालमा पनि मनाउन थालिएको छ । उनले फेसवुकमा फोटो पोष्ट गर्दै फस्ट टाइम हेलिविन फेस्टिभल सेलिब्रेट गरेको […]
अरुणिमाको आगमन कस्तो रहला ?
काठमाडौं । विवाहपश्चात नेपाली सिने नगरीबाट टाढिएकी नायिका अरुणिमा लम्साल म्युजिक भिडियोमा देखापरेकी छन् । हाल अमेरिका बस्दै आएकी नायिका अरुणिमा कलाकार विमलेश अधिकारीको डेब्यू निर्देशनमा बनेको ‘यो मन जलेको छ’ बोलको गीत मा देखापरेकी हुन् । गीतमा कमल रसाइलीको संगीत र स्वर रहेको छ भने डायमण्ड थापाको संगीत रहेको छ। भिडियोमा लम्सालसंगै संगीतकार डायमण्ड […]
रेखाको ‘मालिका’लाई थपियो चुनौती
काठमाडौं । नेपाली चलचित्रमा महिला निर्माताले निर्माण गरेको चलचित्र खासै प्रभावकारी हुन नसकेतापनि निर्मात्री रेखा थापाको अवतरण भने सहज हुँदै आएको पाइन्थ्यो । एकताका नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उनकै दबदबा थियो । उनको अभिनय रहेका हरेक चलचित्रले उल्लेख्य दर्शक पाउँथे । दर्शक मात्र नभएर हल सञ्चालक पनि रेखाको चलचित्र भने पछि अरु प्रदर्शन भइरहका चलचित्र समेत […]
बिहिबार, कार्तिक १५, २०७५